भक्तपुरमा महिला ‘भगवान’द्वारा सासुलाई बोक्सीको यातना, आश्रमभित्रबाट बाहिरिया यस्तो धन्दा – PathivaraOnline
Home > Uncategorized > भक्तपुरमा महिला ‘भगवान’द्वारा सासुलाई बोक्सीको यातना, आश्रमभित्रबाट बाहिरिया यस्तो धन्दा
भक्तपुरमा महिला ‘भगवान’द्वारा सासुलाई बोक्सीको यातना, आश्रमभित्रबाट बाहिरिया यस्तो धन्दा
admin July 7, 2019 July 7, 2019 Uncategorized	0
काठमाडौं, २१ सआर । कुनै बेला भक्तपुरको सूर्यविनायकको पेट्रोल पम्प नजिकै चिया पसल गरेर बेच्न स्वर्गीय सानुभाई बकुन्छेकी पत्नी रातारात अर्बपति बनेकी छिन् । एक रुपियाँ कप चिया बेच्ने पेसा परिवर्तन गरेर हिन्दूधर्मका आस्थावानहरूलाई ‘मुर्गा’ बनाउने कार्यमा लागेकी ती महिलाले आफूलाई ‘भगवान’ नाम राखेकी छिन् । सल्लाघारी नजिकै कटुञ्जेमा ‘दैवी स्थान सत्या शक्ति’का आलिशान घरमा बसेर ती महिला ‘भगवान’ले सर्वसाधारणहरूलाई ठगी गर्दै आएको रहस्य बाहिरिएका हुन् ।
ठगी काण्डहरू एकपछ अर्को गर्दै बाहिर आउन थालेपछि महिला ‘भगवान’का बारेमा दैनिक नेपालले खोजी शुरु गरेको हो । ती महिलाका बारेमा अरु पनि थुप्रै काण्डहरू फेला परेका छन् । भगवान र धर्मका नाममा लुट र ठगी धन्दा चलाउँदै आएका यस्ता व्यक्तिहरूका बारेमा भक्पुरको प्रहरी प्रशासन किन मौन छ खोजीको विषय बनेको छ । कसैको आस्थामाथि चोट पु-याउनु हुँदैन छ । तर, आफूलाई भगवान घोषणा गरेर आफ्नै सेना बनाएर बस्ने यस्ता व्यक्तिले समाजलाई बदनाम बनाउँदै लगेका छन् ।
केही दिन अगाडि सिंहदरबारको पश्चिम गेट अगाडिको भद्रकाली मन्दिरमा बसेर काण्ड गर्दै आएकी ‘धर्ती माता’लाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि भक्तपुर कटुन्जेकी महिला ‘भगवान’का ठगीसहितका काण्डहरू धमाधम बाहिरिएका हुन् । महिला ‘भगवान’का पति स्व.सानुभाई बकुन्छेका साथी धनभक्त तनाबासुले उनीहरूको चिया पसलमा एक रुपियाँ चिया पिएको स्मरण सुनाए ।
‘सूर्य विनायकको पेट्रोल पम्प नजिकै उहाँहरूको चिया पसल थियो । त्यही साइकलको पञ्चर टाल्ने पसल पनि थियो’, तनाबासुले बिगतको इतिहाँस स्मरण गर्दै भने, ‘एक रुपियाँ कप चिया पिएको भुलेको छैन । सानुभाई बकुन्छे मेरो साथी हुन् ।’ बिगतमा ट्याक्टर चलाउने गरेका तनाबासुले भने, ‘सानुभाईले मलाई पनि आफ्नो पत्नीको धर्मका नाममा शुरु गरेको ठगी धन्दामा लाग्न भनेका थिए । मैले मानिन । उनीहरूलाई साथ दिइन ।’ उनले धर्मका नाममा ठगी गर्न नहुने बताउँछन् ।
खान लागउन समेत समस्यामा रहेको सानुभाई बकुन्छेको परिवार अहिले भने अर्बपति भएको छ । सानुभाई बकुन्छेको केही महिना अगाडि हार्टअट्याक भएर मृत्यु भइसकेको छ । दुनियाँलाई नानाभाँती आश्वासन दिएर झुठको खेती गर्दै आएकी महिला ‘भगवान’ले आफ्नै पतिलाई भने बचाउन सकिनन् । महिला भगवानमा शक्ति हुन्थ्यो भने आफ्नै पति हार्टअट्यक आएर मर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन थियो ।
‘पतिलाई उचित उपचार नगराएकै कारण हार्टअट्याक भएर मृत्यु भएको हो’, महिला भगवानको आलिशान घर नजिकै पसल गर्दै आएका एक जना व्यापारीले भने, ‘पतिलाई राम्रो अस्पतालमा उपचार नगराउँदा हार्टअट्याक भएर मृत्यु भयो । मुटुको रोगीलाई तान्त्रिक विद्याले के हुन्थ्यो र ? अन्तिममा आफ्नै पतिको अकालमा मृत्यु भयो ।’
अहिले उनले आफ्नो दर्शन गर्न आउने भक्तहरूलाई भविष्यवाणी गरे वापत न्युनतम १ सय ५० देखि २ लाखसम्म लिने गरेकी छिन् । उनले आश्रमभित्रै पूजाका सामाग्री र अन्य जुडीबुटीहरूको व्यापार पनि थालेकी छिन् । आश्रम र महिला ‘भगवान’माथि लागेका आरोपका बारेमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा हरियो रंगको कपडा लगाएर गेट र आश्रमको वरपर गस्ती लगाएका ‘सेना’ले प्रक्रिया दिएनन् । प्रक्रिया लिन आश्रमभित्र प्रवेश गर्न पनि दिएनन् । यो समाचार दैनिक नेपालबाट लिइएकाे हाे ।
पत्रकार महासंघ सिन्धुलीका अध्यक्ष कार्कीलाई प्रहरीहरूले नै टाउको फुटाइदिएपछि…
कृष्ण ओली भाइ! यी सहासी नेपालीलाइ हेर्नुस्ः दुबै हातगोडा नभए पनि मुखैले लेखेर डिग्री पास गरे… सम्मान स्वरूप एक सेयर अवस्य गर्नुहाेस्
माया त यस्तो होस्: पाकिस्तानकि महिला आफ्नो फेसबुक प्रेमीसंग बिहे गर्न नेपाल नै आइपुगिन
यतिसम्म गर्दा रहेछन् नेपालमा, श:व ओसार्दा पनि भ्रष्टाचार !